Nin kaligiis waddo u dhisay dadka tuulada uu degenyahay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaNin kaligiis waddo u dhisay dadka tuulada uu degenyahay
Hiiraan Xog, jan 12, 2018:- Nin ku nool bariga dalka Hindiya ayaa dhisay waddo dhan 8km isaga oo isticmaalay garweyn iyo agab kale oo kuwa gacanta ah.
Ujeedka ugu weyn ee uu waddada u dhisay ayaa ah in ardayda ay usoo booqdaan tuuladiisa oo aysan jirin waddo gasha, islamarkaasna ku taala dhul buuralay ah.
Ninkan oo lagu magacaabo Jalandhar Nayak, 45 jir ah ayaa waxa uu degenyahay tuulo 10 kiilo mitir u jirta halka ay ku yaalaan iskuulaadka, halkaas oo caruurtiisa ay wax ka bartaan.
Wiilashiisa ayay saacado badan ku qaadataa in ay soo booqdaan gurigooda maadaamaa ay ka talaabaan illaa 5 buurood oo ku xeeran tuulada.
Mas’uuliyiinta dowladda deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in 7-da kiilo mitir ee hartay ay dowladda dhisi doonto.
Muddo labo sano ah ayuu subax kasta u kalahay sidii uu ku baneyn lahaa wadadaas, isaga oo qodayay buurta, dhagxaanta simayay, islamarkaasna meel la mari karo ka dhigayay waddada. Muddo 8 saacadood ayuu ka shaqaynayay waddada maalin kasta.
Waxa uu warbaahinta maxaliga ah u sheegay in uu rajaynayo in wiilashiisa ay si joogto ah u yimaadaan guriga xiliyada fasaxyada ah.
Dowladda Hindiya ayaa sheegtay in ay siin doonto lacag magdhow ah shaqadii uu waddada ka qabtay.
Mr Nayak ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in dowladda ay dhamaystiri doonto wadada inta dhiman, isaga oo dhanka kale dowladda ka codsaday in tuulada loo galiyo biyo iyo koronto.
Mas’uuliyiinta dowladda ayaa shaqada uu hayo ka war heshey kadib markii lagu soo daabacay warbaahinta maxaliga ah.
Warbaahinta Hindiya ayaa ninkan barbar dhigaysa nin kale oo lagu magacaabo Dasharath Manjhi, kaas oo buur ka dhex bixiyay waddo si tuuladiisa oo go’doon ah waddo ugu sameeyo.